Famatsiam-bola amin'ny fitaovana - mpanamboatra vola an-tapitrisany
Ny famatsiam-bola ny fitaovanao dia ahafahanao mitahiry ny volanao amin'ny zavatra ilaina amin'ny orinasam-barotra samihafa. Izahay dia manana tambajotra matanjaka sy mifanerasera amina andrim-panjakana ho an'ny filan'ny kitapom-bolanao. Tsy toy ny orinasa famatsiam-bola mahazatra, ny mpiara-miasa aminay dia manana fandaharana ho an'ny fanombohana ary miorina amin'ny orinasam-bola tsara. Matetika ny orinasa famatsiam-bola fitaovana dia mitaky enim-bolana fara-fahakeliny amin'ny orin'asa mba hihevitra ny mety ho mpifaninana amin'ny fangatahana ny famatsiam-bola nefa amin'ny alàlan'ny fifamatoranay dia afaka nifampidinihana. Ny orinasa tsara indrindra momba ny famatsiam-bola tsara dia tsy hahavita hiandry anao, hahita lalana ahafahana manampy ny filanao haingana haingana araka izay azo atao izy ireo!
Fanohanana ara-bola ho an'ny fitaovana:
Lease na vidiana
Vaovao na fananana mialoha
Sell ​​- Lease Back
Fepetra mora azo
Miara-miasa amin'ny Vendor anao koa izahay
Soavam-bola ambany mora karama tsy misy vidiny miafina
Manamboatra ny fitantanam-bola amin'ny fitaovana izahay fomba fiasa mba hifanaraka tsara amin'ny teti-bola sy ny vola ilaina ary ny takiana amin'ny alàlan'ny safidy famatsiam-bola sy fampanofana lehibe. Famatsiam-bola haingana hatramin'ny valo amby efa-polo ora.
Azo atao ny famatsiam-bola ho an'ny fitaovana voalaza etsy ambany
Kamio sy fako
Kamio Pumper / Vacuum
Kamiao / kamiao volontany
Vatom-pako sy vano
Kamiao mpiasan'ny sampana
Kamio, maivana, ary adidy mavesatra
Fananganana / bozaka / turf Fitaovana
Varotra fivarotana / Kiosks / RMU's / fialantsasatra fialantsasatra
Taxi / Limo / fibaikoana
Mpanazatra moto / Mini bus / Bus bus
Fitaovana birao sy fanaka
Fitaovana IT sy telefaona
Ny fiaramanidina, ny lamasinina ary ny sambo